वास्तुअनुसार सिरानी मुनि यी कुरा राखेर सुत्दा मिल्छ फलिफाप, तपाई राख्नुभयो त ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/वास्तुअनुसार सिरानी मुनि यी कुरा राखेर सुत्दा मिल्छ फलिफाप, तपाई राख्नुभयो त ?
काठमाडौँ । तपाईको सिरानीमुनी के छ रु धेरैले भन्छन्, २र ४ पैसा । अनि महिलाले जवाफ दिन्छन्, कपाल बाध्ने रबर । कतिपयले भन्छन्, ‘सजिलो हुने हुँदा मोबाईल राखीन्छ । तर त्यसो होईन । वास्तुशास्त्रका अनुसार तपाईले आफ्नो सिरानीमूनि यी कुरा राखेर सुत्दा तपाईको विपत्ति दुर हुन्छ । र जीवनमा नया नयाँ ढोकाहरु खुल्नेछन् । यसअर्थ आजै राम्रो कामको सुरुवात किन नगर्ने ?**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
महिनावारी भएको कति दिनमा सम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ ? जानी राखौँ